Madaxweyne Shariif oo la sheegay inuu dhaqaalo badan ku bixinayo sidii uu Gudoomiyayaashii hore ee gobolada Sh/Dhexe iyo Sh/hoose aysan siyaasadda dib danbe ugu soo noqon laheyn, Maxay tahay ujeedadu?? Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Madaxweyne Shariif oo la sheegay inuu dhaqaalo badan ku bixinayo sidii uu Gudoomiyayaashii hore ee gobolada Sh/Dhexe iyo Sh/hoose aysan siyaasadda dib danbe ugu soo noqon laheyn, Maxay tahay ujeedadu?? Madaxweyne Shariif ayaa la sheegay inuu awoodiisa siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba isugu geeyay sidii aysan siyaasada awood danbe ugu yeelan lahayn labada nin ee kala ah Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere) iyo Yuusuf Maxamed Siyaad (indhacade)
Shariif sheekh axmed oo haatan ah Madaxweynaha Soomaaliya ayaa labadaan nin ay soo dhex martay wada shaqeyn iyada oo la sheegayo in Shariif sheekh Axmed inuu mar ahaa Gudoomiyaha Maxkamada Jowhar Maamulkii Sh/dhexe ee uu hogaamin jiray Maxamed Dheere, Gudoomiyihii Maamulkaa ayaa la sheegay in uu kasoo ceyriyey Magaalada Jowhar isaga oo ka qaaday xilkii uu ka hayay maamulka Sh/dhexe.
Sidoo kale Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade ayaa la sheegayaa in Madaxweyne Shariif ay soo wada shaqeeyeen xiligii Maxkamadaha, xiligaas oo maxkamadaha uu gudoomiyaha fulinta ka ahaa Shariif Sh Axmed halka Yuusuf Indhacade uu ka ahaa Wasiirkii Difaaca ee Maxaakimta, kadib jabkii soo gaaray Maxaakiimta, Shariif Sh Axmedna uu isku dhiibay Dawlada Kenya, kadibna uu usii gudbay Yemen, halkaa uu uga sii gudbay dalka Eretiriya oo markale loogu doortay gudoomiyaha ARS-ta, Kadib Markii Shariif loo doortay Gudoomiyihii isbahaysiga dib u xoreynta ayaa sidoo kale xoghayihii Gaashaandhiga isbahaysiga ARS-ta ayaa iyana loo doortay Yuusuf Indhacade, inyar kadib ayaa la sheegayaa in Shariifka iyo Indhacade oo weligood xiriirkoodu wanaagsaneyn uu khilaaf soo kala dhex galay, khilaafkaas oo sidiisii u jirana uu Shariif sh Axmed iyo qeyb ka mid ah ARS-ta ay kasoo goosteen Ereteriya iyaga oo soo aadey heshiiskii Jabuuti oo Shariif Sh Axmed loogu doortay Madaxweynaha Soomaaliya.
Doorashadii Shariifka ee loo doortay Madaxweynanimada Soomaaliya kadib markii uusoo gaaray magaalada Muqdisho ayaa la sheegaya inuu weli Indhacade ahaa Wasiirkii Gaashaandhiga Isbahaysiga Asmara qeybtii heshiiska diidey.
Yuusuf Indhacade oo dagaalo la galay Ciidamadii dawlada Shariifka, Itoobiya iyo AMISOM ayaa markii danbe waxaa uu usoo goostay dhinaca Dawladda uu madaxda ka yahay Shariif Sh Axmed oo aysan isku fiicneyn, Yuusuf Indhacade ayaa usoo goosashada dhinaca dawladda ayaa la sheegayaa inay kusoo qasabtay cadaadis adag oo oga yimid Maliishiyaadka Alshabaab oo mar isaga magan u ahaan jiray, balse markii ay awood heleen damacsanaa inay hubka kala wareegaan, khaarajiyaana Yuusuf Indhacade. Shariif ayaan siinin soo dhoweyntii uu filayey Indhacade maadaama uu marwalba ka didsanaa oo uu aad u necbaa Yuusuf Indhacade iyo Maxamed Dheere, isagoo markasta u arkayey niman uusan qancin karin.
Shariif Sh Axmed ayaa la sheegayaa inuu ka ilaaliyey Maxamed Cumar xabeeb inuu dib danbe xil uga qabto dawladda Soomaaliya, halka uu Yuusuf indhacade uu hal mar u magacaabay Wasiiru dawlaha gaashaandhiga, isaga oo ka ilaaliyey Yuusuf indhacade inuu jagadaas ku shaqeeyo, ilaa Yusuf Indhacade uu gaarsiiyey inuu iska casilo Xilkaas.
Shariif Sh Axmed ayaa in badan isku dayey inuu xiro labadaan nin isaga oo marwalba isku dayayey inuu mar uun labadaan nin xabsiga dhigo, arintaas ayaa la sheegayaa inay mar u suuragashay inuu ku sameeyo Gudoomiyhii hore Maxamed Dheere, halka Indhacade aysan u suurta gelin ilaa hadda, balse uu AMISOM-ta ka codsaday iney marar badan Xirto Yuusf Indhacade, balse ay ka biyo diideen.
Yuusuf Indhacade oo ah nin inta badan ka hadla saxaafadda ayaa marar badan eedeymo kulul ujeediyay Madaxweyne Shariif, madaxweyne Shariif oo u adkaysan waayey eedeymahaas aan kala goa lahayn ayaa isku dayey inuu heshiis uu ku dabayo Indhacade la galo isaga oo la sheegay inuu u maray Shariif Xasan oo ay saaxiib dhow yihiin Indhacade, iyadoo la sheegayo in Shariif Xasan ka wacay madaxtooyada, wadahadal kadibna Indhacade lasiiyey jagada Generaal.
Gen Indhacade oo jagadaan aan loogu darin wax kale oo masuuliyad ama dhaqaalo ah ayaa maalmo kadib bilaabay eedeymihii uu u jeedinayay Madaxweyne Shariif, Shariif Sh Axmed ayaa la sheegayaa inuu dalka Ugandha u tagay oo uu kulan la qaatay madaxweyne Musaveni in AMISOM hub ka dhigis ku sameyso Gen Indhacade, balse waxaa la sheegayaa taliyayaasha AMISOM ee ku sugan Muqdisho inay u sheegeen madaxweyne Musaveni in Ciidanka iyo Hubka Gen Indhacade uu kaalin weyn ka geystay dagaaladii lagula jiray Shabaab sidaa daraadeedna aysan suuragal ahayn in ay si xoog ah hubka uga qaadaan.
Wadahadal ay garwadeen ka ahayd AMISOM ayaa la sheegayaa in tikniko iyo hub uu hayey Indhacade uu kula wareejiyey AMISOM iyo Dawladda Soomaaliya iyada oo la sheegayo in taa bedelkeedna Gen Indhacede la siiyey xooga dhaqaalo ah oo aan la carabaabin inta uu dhan yahay.
Baabuurta Gen Indhacade oo AMISOM balan qaaday sida la sheegay inaysan geli doonin gacan maliishiyaad qabiil ayaa la sheegayaa in qaar ka mid ah la arkay dhowaan iyada oo ay wataan maliishiyaad qabiil oo sida la sheegay ku jufo ah madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sh Axmed, arintaas oo laga baqayo inay dhibaaato ka dhalato.
Dhinaca kale Shariif Sh Axmed ayaa Gudoomiyaha Gobolka Sh Dhexe u magacabay Cabdi Jiinoow oo ay qaraabo dhow yihiin Maxamed Cumar xabeeb, arintaas oo la sheegay ujeedka uu Madaxweyne Shariif u sameeyey inay tahay in Maxamed Dheere aysan hawo kasoo gelin Gobolka Sh/Dhexe oo la sheegay Maxamed Dheere inuu awood badan ku lahaan jiray, uuna muddo badan xukumayay, wax wanaagsana kasoo qabtay sida dadka qaar aaminsan yihiin.
Madaxweyne Shariif ayaa dhaqaalo iyo hub badan ku siiyey Cabdi Jiinoow gudoomiyaha cusub ee Gobolka Sh/dhexe inuu ka ilaaliyo taageerayaashii Maxamed Dheere in ay Maamulka Sh/dhexe lug danbe ku yeeshaan.
Isku soo wada duube labadaan nin ayaa la sheegayaa iney og yihiin shirqoolada uu u maleegay Madaxweyne Shariif iyada oo la sheegay Maxamed Dheere inuu hawlo Caafimaad Dalka dibadiisa u jiro halka Gen Indhacadana la sheegayo inuu iska joogo Magaalada Muqdisho isaga oo la sheegayo inuu qaar ka mid ah saxiixayaasha la leeyahay xiriir dhow.